Sida loo helo shinni oo malab loogu sameeyo Minecraft | Madasha Mobile -ka
Sida loo helo shinni oo malab loogu sameeyo Minecraft
Eder Ferreno | 24/09/2021 14:00 | Ciyaaraha
Minecraft waa mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan adduunka oo dhan, oo leh malaayiin ciyaartoy firfircoon. Mid ka mid ah furayaasha ciyaartaan waa koonkiisa weyn, halkaas oo aan si joogto ah uga ogaan karno waxyaabo cusub. Qaar badan oo ka mid ah ciyaartooyda ciyaaraya horyaalkan ayaa doonaya inay ogaadaan xeeladaha ku saabsan. Tani waa kiiska shinnida iyo malabka ee Minecraft.
Mid ka mid ah shakiga dad badan oo isticmaala Minecraft waa sida loo helo shinni si malab loo sameeyo. Haddii aad ciyaareyso oo aad isku aragto xaaladdan, waxaan haynaa war wanaagsan. Marka xigta waxaan ku tusi doonaa sida aan uga heli karno shinnida ciyaarta caanka ah, si aan u awoodno inaan malab samaysanno.
Waxaa jira dhowr arrimood oo ay tahay inaan tixgelinno si aan u awoodno inaan ka helno shinnida ciyaarta oo aan hadhow malab ka dhigno. Markaan bilaabaneyno inaan ciyaarno ama marka fursadan ay soo baxdo, mar walba ma naqaano sida loo sameyn karo, laakiin runtu waxay tahay inay tahay wax aad u fudud.
1 Meesha laga helo shinnida Minecraft
2 Sida loo helo malab
3 Waa maxay malabka loogu talagalay Minecraft
4 Isticmaalka malabka iyo darfaha
5 Bixiyeyaasha malabka
6 Sida loo dhaqaajiyo finan ama buulal
Meesha laga helo shinnida Minecraft
Shinnida ku jirta Minecraft caadi ahaan waa la helaa meelaha hirarka ama buullada waxaana caadi ah in la arko iyagoo duulaya ama ururinaaya malab. Hawshayada macnahaan ku jirta ayaa ah inaan awoodno inaan helno meelaha laga helo finan -dhaqatadaas meesha aad ku jirto shinni. Tani waxay nagu qasbeysaa inaan ku raadino biomes -yada qaarkood ee ciyaarta caanka ah, maadaama aysan wada ahayn.
Waxaa lagugula talinayaa inaad aado biomesyada soo socda: Bannaanka gabbaldayaha, bannaanka iyo kaynta ubaxa. Sadexdaan biomes waxaan ka heleynaa qadar wanaagsan oo ah geedo oak iyo bjchrk, kuwaas oo leh 5% fursad ah inay yeeshaan malab. In kasta oo kaynta ubaxa ay inta badan tahay noolaha meesha aan ka helno fursadaha ugu badan, waxaa mahad leh tirada badan ee dhirta iyo geedaha ku jira, taas oo gacan ka geysan doonta in shinni badan ku jirto. In dhir badan la helo waa wax fiican, maxaa yeelay waxay ka caawinaysaa shinnida inay si dhakhso leh u soo saarto malab.
Ikhtiyaar kale oo loo leexdo si loo helo shinni iyo malab Minecraft waa in la raaco shinni. Taasi waa, haddii aad ku aragtid guuxa mid ka mid ah biomes -yada, waa inaad raacdaa oo keliya ilaa ay ku noqoto buulkeeda ama rugteeda. Sidan ayaad ku heli doontaa tiro aad u badan oo markaa waxaad xoogga saari kartaa malabka, tusaale ahaan. Inkasta oo ay tani suurtogal tahay oo kaliya haddii cimiladu saamaxdo, sababtoo ah kuma dhacdo cimilada xun ama haddii ay tahay habeen. Raacitaanka shinnida ilaa rugteeda waa mid fudud, laakiin doorashada waqtiga ku habboon in la sameeyo waa muhiim.
Sida loo helo malab
Haddii aan ku guuleysanay inaan ka helno Minecraft shinnida, tallaabada xigta waa inaan helno malab. Tallaabadani dhab ahaantii xoogaa way ka sahlan tahay in la helo shinnida. Waxa kaliya ee aan ku qasbanahay inaan kiiskan ku sameyno waa malabkaas ka soo goosta buulka ama rugta shinnida oo aan ka helnay noolaha aan ku jirno xilligaas. Dabcan, tani waxay dhici kartaa oo kaliya haddii shinni ku filan ay ku laabteen buulkii ama rugtii oo leh manka ku filan si ay u abuurto malab.
Mid kasta oo ka mid ah rugta ciyaarta ayaa sida caadiga ah leh saddex shinni. Maalintiiba mar, shinni kastaa waxay ka tagtaa rugtaas si ay u soo saarto ubaxyo kala duwan oo ku jira noolaha uu ku yaal. Markay sidan sameeyaan, waxaad arki kartaa in muuqaalka shinnidan uu is -beddeli doono ka dibna wuxuu isu diyaarin doonaa inuu ku soo noqdo rugtiisa si tartiib ah. Geedi socodkani waa inuu noqdaa shan jeer wadar ahaan waana marka aad aragto in muuqaalka rugta uu wax yar iska beddelo.
Rugta ayaa bilaabi doonta inay malab dhibicdo, taas oo ah tilmaame aan hore u heli karnay malabkan. Markay taasi dhacdo, waxa kaliya oo ay tahay inaan sameyno waa tag rugta oo isticmaal dhalo galaas ah. Tani waa waxa dhalo malab ah na siin doonto markaa. Tallaabooyinkan waxaan ugu dambayntii ku helnay malabka Minecraft, mahadnaqa shaqada shinnida ciyaarta. Haddii aan dooneyno inaan helno malab badan, waa inaan marar badan ku celcelinnaa habkan, maadaama aan helno finan ka soo daadanaya.
Waxaa laga yaabaa inaadan rabin malabka ku jira rugtaas, laakiin waxaad rabtaa darbiyada. Tani waa wax aan sidoo kale ku heli karno hab fudud. Markaan u soo dhowaanno rugta, haddii waxa aan rabno ay yihiin guddiyadaas, halkii aan isticmaali lahayn dhalo galaas ah waa inaan isticmaalnaa maqas. Waad ku mahadsan tahay adeegsiga maqaska waxaan awoodi doonnaa inaan helno guddiyadan, kuwaas oo mararka qaarkood aad u badan.
Waa maxay malabka loogu talagalay Minecraft
Helitaanka malabka Minecraft ka dib markaad raacdo shinnida ayaa waxtar u leh ciyaarta. Waa maxay malabka runtii ciyaarta ugu fiican? Waxaan u adeegsan karnaa malabka koontadayada si aan u soo celino lix gaajo iyo 2.4 dhereg. Intaa waxaa dheer, malabku wuxuu kaloo leeyahay sifooyin ka hortag ah, sidaa darteed waxay noqon doontaa utility si meesha looga saaro saamaynta sunta ciyaarta. Haddii aan ku hoos jirno saamaynta sunta markaa waa inaan helnaa dhalada malabka ee aan haysanno oo isticmaalno, si saamayntaas gebi ahaanba meesha looga saaro.
Isticmaalka malabka iyo darfaha
Sidaad hore u aragtay, waxaan heli karnaa malab ama waxaan heli karnaa darfaha markaan ka helno rugta Minecraft. Kuwani waa laba badeecadood oo kala duwan, mid kastaa wuxuu leeyahay adeegsi gaar ah, taas oo ah wax ay tahay inaan maanka ku hayno mar walba, maxaa yeelay habka loo adeegsado ama loola macaamilo ciyaarta ayaa kala duwanaan doonta mar walba.
Marka malabku dhalo ku jiro, waxaa loo isticmaali karaa sidii nooc ka mid ah cunto fudud ama dheri ahaan, sidaan ku soo sheegnay qaybtii hore. Waa inaan si fudud uga cabnaa malabka dhalada oo aan uga faa'iideysannaa dheeftiisa sidan, laakiin guud ahaan wuxuu u shaqeeyaa sida cunto kale oo ka jirta Minecraft. Intaa waxaa dheer, waa inaan maanka ku haynaa in haddii aan rabno aan sidoo kale haysanno suurtogalnimada inaan malabka ku beddelno sonkorta ciyaarta.
Haddii halkii malab aan helnay darbiyo Laga soo bilaabo rugta shinnida ee Minecraft, waxaan ka helnaa walax halkii cunto. Alwaaxyadu waa wax aan u adeegsan doonno inaan wax ku samayno, kiiskan waxa inta badan la sameeyaa waa in la isku daraa guddiyadaan nooc kasta oo alwaax ah, si aan u awoodno inaan dhisno rug, oo malab nagu siin doonta mar walba. dheeraad ah. Waa hab lagu heli karo malab noo gaar ah, oo aan markaa adeegsan karno.
Bixiyeyaasha malabka waa wax lagu arkay qaababkii ugu dambeeyay ee Minecraft. Kuwani waa qaar ka mid ah aaladaha wax ku oolka ah ee dooni doona u oggolow dhalada si otomaatig ah dhammaan noocyada dareeraha ah. Taasi waa, waxay ku shaqayn doontaa biyo iyo malab labadaba, tusaale ahaan. Tani waa wax noo oggolaan doona inaan ka dhigno geedi socodka helitaanka malabka ciyaarta xitaa mid fudud, taas oo ah wax ina wada xiiseynaya.
Waxa kaliya ee aan u baahan doono kiiskan waa in wax yar laga ogaado dhagaxa cas, si aad awood ugu yeelatid inaad si otomaatig ah u socodsiiso nidaamka noocan ah ee beerta. Tani waxay suurtogal ka dhigaysaa in si joogto ah loo ururiyo oo loo dhalo malabka Minecraft, iyada oo aan la sugin ama la raacin shinnida ciyaarta. Waa ikhtiyaarka ugu xiisaha badan haddii aan ku fikirayno inaan ku ururinno malab xaddi badan ciyaarta, maadaama ay noo oggolaan doonto inaan ku shaqayno habkan oo noo oggolaato inaan xoogga saarno howlaha kale.
Intaa waxaa dheer, Minecraft waxay sidoo kale noo oggolaanaysaa inaan maqas ku tuurno qaybiyahaan, si aan si otomaatig ah ugu soo aruurinno darfaha. Haddii halkii malabka waxa noo dan ah ay tahay inaan yeelano darbiyo, waxaan u adeegsan karnaa isla habsocodkan, laakiin waxaan si fudud u adeegsanaynaa maqasyadaas ku jira.
Sida loo dhaqaajiyo finan ama buulal
In kasta oo laga hadal hayo buulal ama finan shinni ah gudaha Minecraft, ma jiraan farqi dhab ah oo u dhexeeya, labaduba waxay noo oggolaan doonaan inaan helno malab iyo darbiyo. Farqiga kaliya ee dhabta ah ayaa ah in midkood (buulku) uu yahay wax si dabiici ah loo soo saaray, halka rugtu ay tahay wax aan nafteena abuuri karno, sidaan ku muujinnay qeybihii hore. Laakiin qaliinka labadooduba waa isku mid mar walba.
Waxaa jiri kara waqtiyo aad rabto inaad ka guurto rugta ama buulka ciyaarta. Tani waa geedi socod xasaasi ah, maxaa yeelay waa inaadan ka xanaajinin shinnida ku siisa malabka. Si aad si ammaan ah ugu dhaqaajiso, adigoon ka xanaaqin shinnida, waa inaad isticmaal qalab leh sixir taabasho xariir. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho buulkan ama rugtan oo ay ka buuxaan shinni ka dibna aad awoodid inaad guurto adiga oo aan lumin malabkii, wax ka dhici kara Minecraft. Isticmaalka sixirkan waa lama huraan si loo ilaaliyo ammaankiisa.
Sidoo kale, waa inaad hubisaa inaad dabka dhigto buulka hoostiisa ama rugta Qiiqu wuxuu caawiyaa nasinta shinnida, si aysan uga bixin gurigaaga sidaas darteedna habsocodku wuu sahlan yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » Sida loo helo shinni oo malab loogu sameeyo Minecraft
Sida gebi ahaanba loo tirtiro koontada Samsung